Iskuulada Kenya oo laga dhigi doono casharo la xiriira la daga... | Universal Somali TV
Iskuulada Kenya oo laga dhigi doono casharo la xiriira la dagaalanka Musuqa
Ardayda Kenyaanka ah waxaa Xarumaha waxbarashada lagu bari doonaa hadda wixii kadambeeya casharo ku saabsan Musuq-Maasuqa.
Gudiga Anshaxa iyo la dagaalanka Musuqa ee EACC ayaa sheegay in ay diyaariteen casharo la xiriira balse ay sugayaan fasaxa wasaarada waxbarashada si loo dhaqan galiyo.
Marka la Saadaaliyo inkastoo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kudhawaaqay dagaal kadhan ah Musuq-Maasuq iyo Lunsiga Lacagaha Dadweynaha lana sheego Madaxweynaha arintaasi inay dhab katahay hadana ma muuqato saan-saan Musuqa looga Cirib-tirikaro Kenya lakiin waxaa laga yaabaa in wax uun laga qabto.
Kenyaanka waxaa lagu xantaa oo Xitaa iyaguba Qirtaan in Musuq-Maasuqu ku dhax noolyahay oo Dhiigga ka galay.
Wax aad ubaratay masahlano sidaad kudayso balse laga yaabaa haddii Garsoorka, Waaxda dambi oogista iyo Laamaha haddeey is gaashaan oo tallaabooyin la taabankaro qaadaan in wax uun laga qabto Musuqa daashaday Kenya.
Wadanka Kenya waa wadan Amni ahaan, waxbarasho ahaan, Ganacsi ahaan, Nolol ahaan, Xorriyad ahaan iyo Xaquuqda Diimuhu leeyihiin aad ugu fiican balse Musuqu yahay Cudurka ugu halista badan muddana lagusoo dhaqmaayey in la cirib-tirana adkaaneeyso.
Kan-xigaMartin Fayulu oo sheegtay in uu ku gu...
Kan-horeDonald Trump oo socdaal ku tagay xadk...
45,935,264 unique visits